Generator Monitoring - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
Okokhelekayo Level Inzwa
Izinsuku ezingu-7 ngesonto kusuka 9:00 am kuya 7:00 pm
Base operation generator uhlelo kuhlanganiswe ukuphathwa isistimu ukuthi amaphi lakhula nezinqubo ukusebenza kwansuku zonke, leli gama lihlanganisa nezici ezifana isimo generator ngesikhathi sangempela kanye nokuqapha i-alamu, Inqubo operation ukuphathwa, ukusebenza kwabasebenzi nokuphathwa, ukuphathwa yesondlo nsuku zonke, ukuphathwa ezinkulu ukulungisa, izesekeli ukuphathwa, futhi eziyisisekelo kolwazi, njll
Generator Isimo Monitoring:
Isikhathi Real isizinda operation isimo zokuqapha alamu, ukusekela main control panel, ezifika 37 lesimo 18 alamu ukuqapha
Maintenance and Major ukuphathwa inqubo ukulungisa
Maintenance and Ukungena: Lapho yesondlo eseqedile, ulwazi angafakwa via mobile bese ulayisha izithombe esithwetshuliwe isikhungo, noma angafakwa ngu umuntu okhethwe ukuba PC uma sesibuyela ehhovisi
icebo ngenyanga ezayo
umzimba Executive yesondlo Izitolo
Ukulungisa ukulungisa iyunithi
Emva impatho usuphothuliwe, lo yokubhalisa ifektri
Bhalisa ku ifektri
Generator esithathwayo ibe yizimiso ukubhalisa futhi ukulungisa
inqubo yokulungisa ukuphathwa
Alamu ukuphathwa: Uma i-alamu kwabangela, i-alamu uzobe ngokushesha wathumela ku mobile esethiwe kusukela abaqondisi, onjiniyela, kanye uchwepheshe, ukubazisa base ulwazi oluyisisekelo, isimo generator, kungenzeka okuyiphutha, futhi ulwazi olufanele, uma izisebenzi kungathatha ngokushesha nezenzo ezifanele.
Jobe Ukungena: Emva ukulungisa ikhwane izimo kwalungisa angafakwa kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula, uphinde ulayishe ngezithombe wathathwa; noma ofakwa siqu okhethwe ikhompyutha uma emuva ehhovisi.
Rush yokulungisa Umbiko: Zonke umbiko umlando rush ukulungisa kungaba ihlolwe njengoba ngosuku, ngesonto, noma ngenyanga, umbiko kungenziwa elakhiwe amaklayenti kahle kakhulu.
Ukuze ukulungiswa ngale setha isikhathi, kuzoba uhlamvu obomvu ukuboniswa.
Usuku ukuhlaziywa: Uhlelo ingahlaziya ukukhanda rush e njalo ngenyanga, ihlanganisa isikhathi esichithwa, izesekeli indawo, esiteshini indawo, silungisa ukuvama, iminyaka generator enkonzweni, njll
Thola izindaba zakamuva efike nsuku zonke!